Oge Ọgụgụ: 4 nkeji European mba n'anya na-eme ememe ha mba ememe - karịsịa ndị na-ahụ ọtụtụ ndị njem. Ị na-eme atụmatụ ịhụ otu n'ime mba ndị a n'oge ha na mba ememe? Ọ bụrụ otú ahụ, e nwere ọtụtụ ụzọ na-esonyere ndị ememe! Ga-enwekwa ohere magburu onwe ya…
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji 2018 fọrọ nke nta na njedebe, nke pụrụ nanị ịpụta na Christmas bụ nso! Ndị mmadụ na-ka na-anaghị ejikere maka ya, mana maka ndị njem, ọ bụ nnukwu oge na-eme atụmatụ a njem. Ọ bụrụ na ị na-achọ nri obodo-eji Christmas na, anyị nwere…